I-CNC machining inqubo yokukhiqiza ethabathayo lapho ucezu lwento eluhlaza lunqunywa engxenyeni yokugcina oyifunayo usebenzisa isilawuli senombolo yekhompyutha. Imishini ye-CNC yaba yizinga lomkhakha ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 futhi isalokhu iyindlela yokuncoma ekhethwayo kuze kube namuhla. CNC machining kuyinto manuf ...
I-Carbon Steel Castings
Insimbi yeCarbon iyinto ethandwayo enhlobonhlobo yezicelo. Ayibizi, itholakala kalula emabangeni amaningi, futhi ingaphathwa ngokushisa ukuze ithuthukise amandla ayo, i-ductility, nokusebenza kwayo ngemishini. I-Dongying Shengyu Metal Product Co.Ltd., Ihlinzeka nge-carbon steel ephezulu ne-low alloy casting ...
Isikhungo Esihamba Phambili Sokuphonsa Insimbi Engagqwali eChina
I-Dongying Shengyu Metal Product Co., Ltd isisekelo sigxile ekukhiqizeni utshalomali ekubunjweni izingxenye zensimbi engagqwali, izingxenye ze-valve, izesekeli zezimoto, izingxenye zezimoto, izinsimbi, izinto zokwakha, amapayipi okufaka, izingxenye ezipholisha njll. ..
Ikhwalithi Yesisekelo Sesisekelo Isho Ukulingiswa Kwekhwalithi
Kwama-Foundries, isikhunta sokulingisa esezingeni eliphakeme kusho, kusho izindleko eziphansi, ukukhipha okuphezulu nenzuzo. Njengamanje, umkhakha wasekhaya wesikhunta usungule ngokushesha, kuphela isitshalo se-aluminium gravity die casting esizoba ngaphansi kwamakhulu, nangokuthuthukiswa komkhakha wezimoto kanye ne ...
Uyazi ukuthi iyiphi indawo evamile yezingxenye zokucubungula ezisetshenziselwa i-Precision Hardware?
Ukusebenza kwe-Hardware kungumsebenzi omuhle kakhulu, ukucutshungulwa kwehardware kungabizwa nangokuthi ukucutshungulwa kwensimbi, lapho indawo yokucubungula izingxenye nayo ingahlukaniswa ngezinhlobo eziningi, njengokucutshungulwa kwe-oxydation yensimbi, ukucutshungulwa komdwebo wensimbi, i-electroplating, ukucubungula okuphezulu komhlaba, insimbi. ..
Imakethe Yomhlaba Wonke Yokutshalwa Kwezimali (2020-2025) - Ngohlobo Lenqubo, Okokusebenza, Ukusebenza kanye Nesifunda
Kusuka ku-2014 kuye ku-2019, izinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe lemakethe yokulingisa utshalomali lomhlaba cishe liyi-5%. Uma ubheka phambili, abashicileli balindele ukuthi imakethe yomhlaba wonke yokutshalwa kwezimali iqhubeke nokukhula ngokulingene eminyakeni emihlanu ezayo. Ukuphonswa kotshalo-mali, noma ukukhishwa emanzini, kuyinqubo yezimboni eyenza ...